Soo dejisan AIDA64 Extreme 5.60.3700 Standard... – Vessoft
Soo dejisan AIDA64 Extreme
AIDA64 ba’an – software ah si loo baadho oo la tijaabiyey waxqabadka nidaamka. AIDA64 ba’an waxaa ka mid ah modules badan oo la dhisay-in si ay u falanqeeyaan qaladaad hardware ah, xakameeyo dareemayaal heerkulka, xawaaraha ogaado taageeraha ah iyo xaqiijin ka kooban computer kale. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan tijaabinta drives adag ka, processor iyo xusuusta hawl. AIDA64 ba’an awood u si aad u eegto macluumaadka faahfaahsan ka dib markii falanqaynta ka mid ah qaybaha kumbiyuutarka, software iyo qaybaha kala duwan ee nidaamka qalliinka. AIDA64 ba’an ay sidoo kale taageertaa xogta la natiijooyinka baadhista nidaamka ee files of qaabab kala duwan kaydinta.
U fiirsasho iyo baaritaano ah ka kooban qalabka kombiyuutarka
Falanqaynta nidaamka qalliinka iyo software
Views macluumaad faahfaahsan oo ka dib markii imtixaanka
Saves natiijada imtixaanka
Comments on AIDA64 Extreme:
AIDA64 Extreme Software la xiriira:
Imtixaanka Qalab Handy reserved iyo socdo kaararka garaafyada ka horumarinta kala duwan. Software wuxuu kuu ogol yahay inaad la qabsato goobaha qaar ka mid ah ka dhigi xawaaraha sawirada kombiyuutar.
English, Українська, Français, Español... Wireshark 2.2.1 Standard iyo Portable
Imtixaanka Tool ee drives soo kabashada adag. Software la shaqeeya nidaamyada file kala duwan oo kuu ogolaanaya in aad baarista ee drives adag magdhow ama qalad.
Imtixaanka Software ayaa go'aamisa xogta farsamada ee xubno ka qayb kombiyuutarka ah. Utility ayaa ku siinayaan shaqada leh noocyo badan ka kooban kooban.
Rainmeter 3.3.2.2609 iyo 4.0.0.2627 beta
العربية, English, Українська, Français... Speedfan 4.51
Imtixaanka Software si ay ula socdaan xaaladda kombiyuutarka. Sidoo kale software ka kooban yahay qalabka si loo xakameeyo iyo qabsato xuduudaha ka kooban yahay kombiyuutarka.
Imtixaanka software The imtixaamaa awoodaha kaararka video. software ka kooban utility ka dhisay-in in uu soo bandhigo warbixinta faahfaahsan oo ku saabsan xuduudaha ka kaarka video.
Converters Audio Qalab Sahlan ee la shaqeeya qaabab file maqal ah oo caan ah. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad edit iyo saaro raad audio ka faylasha video.
العربية, English, Українська, Français... Fences 2.13